Linus uye iyo imposter syndrome. Torvalds anoreurura | Linux Vakapindwa muropa
Linus uye iyo imposter syndrome. Torvalds anotaura nezve kukahadzika kwake, kuzvikudza uye basa razvino
Linus uye iyo Imposter Syndrome inonzwika senge saga gumi nevaviri. Zvisinei, ndiyo tsananguro yeimwe yekureurura izvo zvakagadzirwa neLinux pamusangano wepachena wepurogiramu muFrance.
Zvinoita sekudaro saJorge Luis Borges, haasi kuzopa hurukuro kushamwari yedu yeFinland. Unosarudza kutaura nevanhu vaunovimba navo. Mune ino kesi akasarudzwa aive Dirk Hohndel, General Director veMahara Software yeVMware.
1 Linus uye iyo impostor syndrome Inokukanganisa sei?
1.1 Wakazvikunda sei?
2 Mutungamiri anoziva kutaura Kwete
Linus uye iyo impostor syndrome Inokukanganisa sei?
Pasi peshoko rekuti "impostor syndrome" inosanganisirwa akateedzana manzwiro ekusararama zvinoenderana nedambudziko kunyangwe kubudirira kuri pachena.
«Vanyengeri» vanotambura nekusazvidzora kusingaperi uye pfungwa yekubiridzira kwepfungwa izvo inokanganisa chero kunzwa kwekubudirira kana humbowo hwekunze hwekugona kwako. Avo vanotambura nazvo havakwanise kudzidza mukati mabudiriro ako, kunyangwe wakabudirira sei Mumunda wake.
Chinovhiringidza ndechekuti avo vanozviona ivo vanowanzove vanhu vekunoshamisa kuita. Mune mamwe mazwi, munyengeri syndrome haaenzane nekuzvitarisira pasi kana kushaya chivimbo. Muchokwadi, vamwe vaongorori vakaibatanidza ne el kukwana, kunyanya mumadzimai uye pakati pevadzidzi.
Munguva yehurukuro, iyo yaive chikamu cheEuropean Mahara Software Summit, Torvalds akataura izvozvo urikugutsikana here nezviri linux hoY. Asi, munguva yakapfuura aive nekukahadzika nezve kugona kwake. Saizvozvo, akabvuma kuve nekumwe kusarudzika kwekunyengedza chirwere.
Kunyangwe Linux yakaratidza kuve inobudirira mune yega yega indasitiri chikamu kunze kwedesktop, A Torvalds ainetseka kuti basa rake raive risiri chinhu kunze kwekudzokororwazven yeUnix.
Linus Torvalds ndiye muvambi we chirongwa chakabudirira seLinux: git.
Git ndeye yakaparadzirwa vhezheni yekudzora sisitimu yekutevera shanduko kune kodhi kodhi panguva yekugadzirwa kwesoftware Iyo yakagadzirirwa kuratidzira basa pakati pevagadziri, asi inogona kushandiswa kuteedzera shanduko kune chero seti yemafaira.
Unhu hwayo ndeiyi:
Tsigiro yeasina-mitsara akaparadzirwa mafashama.
Linus Torvalds yakagadzira Git muna 2005 kuvandudza iyo Linux kernel.
Kusiyana neakawanda makasitoma-server masystem, yega yega Git dhairekitori pane imwe neimwe komputa inzvimbo yakazara ine yakazara nhoroondo uye yakazara vhezheni yekutevera kugona, zvisinei nekusvika kune network kana yepakati server.
Git yemahara uye yakavhurwa sosi software uye inogoverwa pasi pemitemo yeGNU General Public License vhezheni 2.
Mamwe a yakakurumbira vhezheni yekudzora masevhisi seGitHub kana GitLab zvinoenderana nebasa reLinus.
Git yakandiratidza kuti ndinogona kuzviita. Kuve nemapurojekiti maviri akaita shanduko huru zvinoreva kuti ini handisi ponyoni imwe.
Pashure kuti ndaparadzana kwechinguva kernel kukura, uye kuda kusvika hafu yezana ramakore, Linus inoita wasvika pachiyero muhupenyu hwako. Inozivikanwa nenzira inehasha yaakataura maonero ake, inoita kunge yawana nzvimbo yekunzwira tsitsi:
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo chandinofunga kuita ndechekuvhurika kuitira kuti vanhu vanonditumira kodhi, kungave zvigamba kana zvikumbiro, vanzwisise kuti basa ravo - pamwe harikosheswe nekuti harigare richikosheswa - asi zvirinani ivo vachava nemhinduro.
Mutungamiri anoziva kutaura Kwete
Dirk Hohndel akamubvunza nderipi basa rako razvino muLinux kukura. Mhinduro yaive:
Basa rangu kuverenga nekunyora akawanda emaemail. Chaizvoizvo, basa rangu riri, pakupedzisira, nezvekuti "kwete." Munhu anofanira kuti "kwete" pachigamba ichi kana kuti chikumbiro chekuwedzera chimwe chinhu. Izvi zvinodaro nekuti vanogadzira vanoziva kuti kana vakaita chinhu uye ini ndikavaudza kuti havaite, saka vanoita basa riri nani kunyora kodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linus uye iyo imposter syndrome. Torvalds anotaura nezve kukahadzika kwake, kuzvikudza uye basa razvino
Vivaldi 2.9 inosvika ichiwedzera zvimwe sarudzo kumenu yayo uye kugadzirisa mashandiro
Pave nemakore makumi mashanu kubva pakatumirwa meseji pane yekutanga network network "ARPANET"